वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीको शेयर बजारमा विशेष रुची
२१ कार्तिक २०७५, बुधबार १५:३७
बुटवल, २१ कात्तिक । वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरु शेयर किनबेचमा संलग्न हुने क्रम बढेको छ ।
खासगरी कोरिया, दुवई, साउदी अरबलगायतका मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले आफ्नो परिवार वा अनलाइनमार्फत् रु. ५० हजारदेखि रु. पाँच लाखसम्मको शेयर खरिद तथा बिक्री गर्ने गरेको बुटवलस्थित विभिन्न शेयर दलालका कार्यालयले जनाएका छन् ।
‘उनीहरुले विदेशबाट नै भन्छन् र हामीले खरिद गरिदिन्छौँ,’ दक्षिणकाली इन्भेष्टमेण्ट बुटवलका शङ्कर भण्डारीले भने । पूँजी बजार अनलाइन प्रणालीमा गएपछि सबैभन्दा बढी वैदेशिक रोजगारीमा गएका लगानीकर्ता खुशी देखिएको उल्लेख गर्दै उनले आफ्नो कार्यालयबाट सबैभन्दा बढी कोरियाका रहेको बताए । अघिल्लो साता सो कार्यालयबाट कूल रु. ६० लाख बराबरको कारोबार भएको छ । एशियन सेक्युरिटिज प्रा. लि. (२६) नं दलाल कार्यालय बुटवलका पुष्पनिधि ढकालले भाइवरको प्रयोगमार्फत शेयरको माग गर्ने गरेको जानकारी दिँदै तीनदेखि रु. पाँच लाख बराबरको शेयर खरिदको माग भएको छ भने ।
दुवही, साउदी अरब र कोरियाबाट समेत शेयर कारोबारका लागि आउने गरेको उल्लेख गर्दै रुपन्देही, पाल्पा र गुल्मीका वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिक शेयर बजारप्रति आकर्षित भएको उनको भनाइ थियो । सो सेक्युरिटिज प्रा. लि. बाट अघिल्लो साता कूल रु. ५७ लाख ५१ हजार बराबरको कारोबार भएको थियो ।